फोरम र राजपाबीच एकता होेला ?-निमिष झा - Yatra Daily
Home स्वतन्त्र विचार फोरम र राजपाबीच एकता होेला ?-निमिष झा
फोरम र राजपाबीच एकता होेला ?-निमिष झा
गत हप्ता मधेशका दुई पार्टीहरूबीचको पत्र आदान–प्रदान धेरै चर्चाको विषय रह्यो । पार्टी एकीकरणका लागि संघीय समाजवादी फोरमले राजपालाई लेखेको पत्रको प्रत्युतर दिएर राजपाले पनि आफू एकीकरणको पक्षमा रहेको संकेत दियो । दुवै दलले एकीकरणका लागि भन्दै आ–आफनो वार्ता टोली पनि बनायो तर अहिलेसम्म वार्ताले औपचारिक प्रवेश पाएको छैन । फोरमले एकताको लागि राजपालाई गरेको प्रस्तावलाई उसले पनि सकारात्मक रूपमा लिए पछि दुवै दलबीच एकता हुने नै हो भन्ने सम्भावनासँगै संशय पनि पैदा भएको थियो । के दुवै पार्टीबीच साँच्चैकै एकता हुन लागेको हो वा यो कुनै राजनीतिक चाल मात्र हो भन्ने कोणबाट पनि परिघटनालाई विश्लेषण गरिन थालिएको हो । वस्तुतः मूलधारको राजनीतिमा सिके राउतको पर्दापण पछि फोरम र राजपाबीचको एकताले तीव्रता पाएको हो । फोरमले मंसिर २३ गते विचार मिल्नेहरूसँग पार्टी एकीकरण गर्न वार्ता समिति बनाएर राजपासँग एकताका लागि पत्र पठाएको थिया तर राजपाले त्यसको जबाब त्यति खेर दियो जब सिके राउत सरकारसँग ११ बुँदे सहमति गरेर राजनीतिको मैदानमा ओर्लिसकेका थिए । राउतको अवतरणबाट झस्केको राजपाले अनि मात्र एकताका लागि सकारात्मक रहेको भन्दै प्रत्युतर दिएको हो ।
एकताका लागि दुवै दलबीच पत्र आदान प्रदान भएपनि दुवैको वार्ता समितिबीच औपचारिक छलफल प्रारम्भ भएको छैन । दुई दलबीच एकताले कस्तो मोड लेला अहिले केही भन्न सकिन्न अथवा एकता नै नहुने हो कि भन्ने बारे पनि केही आंकलन गर्न सकिन्न ।
यति हुँदा हुँदै फोरमले बाबुराम भट्टाराईको नयाँ शक्ति पार्टीसँग पनि एकता गरिरहेको खुल्न आएको छ । दुवै दलबीच एकताका लागि चिठीमार्फत सम्वाद आदान–प्रदान भइरहेको छ । फोरमको पहिलो ध्यान भने राजपाभन्दा भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टी तिर गएको देखिन्छ ।
फोरम र राजपाबीचको वार्ताबारे बाहिर जति चर्चा छ, त्योभन्दा बढी वार्ता र छलफल नयाँ शक्तिका नेताहरूसँग भित्रभित्रै भइरहेको छ । राजपासँग एकीकरण गर्नुअघि नै नयाँ शक्तिसँग पार्टी एकीकरण गर्ने फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रयास गरिरहेका थिए ।
चुनावअघि पनि फोरम र नयाँ शक्तिबीचको एकीकरण प्रयास गरिएको थियो र एकीकरणका लागि विधान र घोषणापत्रसमेत तयार भएको थियो तर एकीकृत पार्टीको अध्यक्ष को हुने भन्ने विषयमा विवाद हुँदा एकीकरण हुन सकेको थिएन । फोरमले नयाँ शक्तिसँग एकीकरणको लागि प्रयास थाल्दै गर्दा उसले राजपासँग पत्र आदान–प्रदान किन गरि रह्यो त ? के फोरम, नयाँ शक्ति र राजपाबीच एकीकरण सम्भव छ त ?
राजपाले फोरमसँग एकीकरण चाहेको छ तर उसले नयाँ शक्तिसँगको एकताको परिकल्पना नै गरेको छैन । तर फोरमले नयाँ शक्तिसँगै राजपासँग पनि एकताको पहल गर्नु उनको रणनीतिक बाटो अझै स्पष्ट भइसकेको छैन । उसले किन एकै पटक दुइवटा दलसँग एकताको प्रयास थालेको हो ? शायद एउटा न एउटासँग अवश्य एकीकरण सफल होला । तर यो सँगै फोेरमले राजपासँग खेलिरहेको भेउ पत्ता लगाउन गाह्रो छैन । फोरमले खासै महत्व नदिएर राजपालाई पत्र पठाएको छ ।
राजपा नेपालभन्दा पहिले नयाँ शक्तिसँग एकीकरण हुने सम्भावना बढेको छ । राजपा नेपालसँग अहिले पत्र मात्र आदान–प्रदान भएको छ । अझै औपचारिक वार्ता हुने कुनै सम्भावना देखिएको छैन तर यता नयाँ शक्तिसँग औपचारिक वार्ता अगाडि बढिसकेको छ । आखिर फोरमले राजपालाई एकताको प्रस्ताव गरे पनि किन नयाँ शक्तिसँग एकीकरणलाई अगाडि बढाएको हो ? राजपाले फोरमको रणनीति थाहा किन पाउन सकेन र किन वस्तुस्थितिको विश्लेषण गरी एकताका लागि सकारात्मक रहेको सन्देश दियो त ? यावत प्रश्नहरूको खोजी गर्दा फोरमले राजपालाई कमजोर देखाउन खोजेको हो । फोरम र नयाँ शक्तिबीच एकीकरण हुँदा राजपा स्वतः झन कमजोर हुनेछ । अहिले पनि राजपाका शीर्ष नेतृत्वबीच तीव्र मतान्तर छ । राजपा भित्रै छ वटा राजपा रहेको प्रतीत हुन्छ । जुन पार्टीले आफूभित्रै एकीकृत हुन सकेको छैन उसले अरूसँग के एकता गर्ला र भन्ने कोणबाट पनि फोरमले हेरिरहेको छ ।
२०७२ सालमा एकताका लागि फोरम नेपाल, तत्कालीन तमलोपा र सद्भावना पार्टीबीच पनि छलफल भएको थियो । त्यतिबेला एकता अन्तिम चरणमा पुगेको थियो । तर फोरम नेपालले अशोक राई नेतृत्वको संघीय समाजवादी पार्टी नेपालसँग २०७२ जेठ ३२ गते एकीकरण ग¥यो । यसपटक पनि त्यही हुने सम्भावना बढेको छ । एकताका लागि राजपा नेपालसँग वार्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ तर नयाँ शक्तिसँग नै एकीकरण हुने सम्भावना बढ्दै गइरहेको देखिएको छ । सम्भवतः फोरमले राजपासँग एकीकरण नगर्ने मुड बनाएको छ । नयाँ शक्तिसँग एकीकरण भएपछि राजपा नेपालसँग एकीकरणका लागि कुनै आधार रहँदैन पनि । (मधेश दर्पण फिचर सेवा)
Previous articleविकासमा जनचासो र जनसहभागिताको महत्व-लक्ष्मी विलास कोइराला
Next articleमहिला हिंसाको प्रमुख कारक ‘दाइजो’-अम्बिका यादव
सरितामाथि कारबाही : अनुदार लोकतन्त्रको परिणति